आइन्स्टाइन कसरी सफल भए ? – आफ्नो प्रेरक संसार
आइन्स्टाइन कसरी सफल भए ?
Bibas Kulung — १४ भाद्र २०७७, आईतवार २०:०५ 1 comment
महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन एकपटक एउटा कलेजका विद्यार्थीसितको अन्तरसंवादमा थिए । उनी विद्यार्थीका प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए । त्यत्तिकैमा एक विद्यार्थीले सोधे– हजुरलाई सबैले महान् वैज्ञानिक भन्छन् । पक्कै पनि हजुर सजिलै महान् वैज्ञानिक बन्न सफल हुनुभएको होइन होला । त्यसो हो भने हजुरको सफलताको रहस्य के हो ? के हामीलाई बताउन मिल्छ ?
विद्यार्थीको प्रश्न सुनेर आइन्स्टाइन केहीबेर मौन रहे, केही गमे र हल्का मुस्कुराउँदै जवाफ दिए– म तपाईंहरूका प्रश्नको जवाफ दिनै यहाँ उपस्थित भएको हुँ । त्यसैले, म सकेसम्म तपाईंहरूका प्रश्नको यथोचित जवाफ दिने प्रयत्न गर्छु । म सफल छु कि छैनँ, त्यो तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । तपाईंहरू मलाई सफल देख्नुहुन्छ भने मेरो यो सफलताको रहस्य हो, अविचलित हिम्मत ।
अल्बर्ट आइन्स्टाइन अल्बर्ट हुबार्ड महान भनाईहरू
Pushpa raj parajuli says: